I-Bitumen Tank, i-Bitumen Emulsion Plant, i-Diathermic I-Boiler yeoyile-i-Jianeng
Indlela yokufudumeza itanki ye-asphalt ethe tye eveliswe yinkampani yethu inokwahlulwahlulwa: ubushushu beoyile yeoyile, ukufudumeza kombane kunye nokufudumeza ngokuthe ngqo ngumtshisi. Umthamo unokwenziwa uhlengahlengiswe ngokweemfuno zomthengi, kwaye unokungena kwisithuthi senkonkxa. Iindidi ezahlukeneyo zokufudumeza i-coil kunye nesixhobo sokuxuba zinokwenziwa ngetumen tank ngeenjongo ezahlukeneyo, ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zomsebenzi onyanisekileyo. Xa kusetyenziswa iitanki ezininzi zetanki ngexesha elinye, kuya kufakelwa umbhobho ongaphambi kwetanki ukulungiselela ukufakelwa kwendawo yomsebenzi. Kwaye zonke imibhobho ifakwe kwangaphambili kumzi-mveliso. Kwiimeko eziqhelekileyo, akukho lutshintsho lufunekayo emsebenzini, ukuze sikwazi ukwenza indawo ukukhusela ukuthembeka kwemibhobho. Ukuba itanki yeetumen ifuna i-flue gesi ekhutshelweyo, inokuhlelwa ngokweemfuno zomthengi.
Funda ngakumbi Qhakamshelana nathi
Indlela yokufudumeza itanki ye-asphalt ethe nkqo eveliswa yinkampani yethu yahlula-hlulwe: kukufudumeza i-oyile heating kunye nokufudumeza kombane. Umthamo unokwenziwa ngokwezifiso ukusuka kwi-20 m³ ukuya kwi-2000 m3 ngokweemfuno zomthengi. Iindidi ezahlukeneyo zekhoyili zokufudumeza kunye nezixhobo zokudibanisa zingenzelwa iitanki zetumen ngeenjongo ezahlukeneyo zokuhlangabezana neemfuno zokusetyenziswa kweyona meko yokusebenza. Itanki le-asphalt ethe nkqo linokufakelwa umatshini wombane wamanqanaba okombane ngokweemfuno zomthengi zokuqonda ulawulo oluzenzekelayo lwenqanaba lolwelo oluphezulu nolusezantsi. Ukuba itanki yeetumen ifuna i-flue gesi ekhutshelweyo, inokuhlelwa ngokweemfuno zomthengi.
Itanki yecutum yeetumen tank eveliswe yinkampani yethu kufanelekile ukugcina ibhitumene kunye nokuhamba. Inokuhanjiswa ngokuthe ngqo ngolwandle ngokwendlela yokuhambisa isikhongozeli, ngomthamo omkhulu oziikubhite ezingama-55 eemitha, kwaye iyakwazi ukuyilwa kwaye ifakwe ngee-agitators. Itanki yebhitumene yohlobo lwebhitumene ilungele kakhulu ukuhamba kunye nokuhambisa i-asphalt. Itanki yokuthwala iitumum itanki inokwenziwa kubushushu ukuqhuba ukufudumeza ioyile, ukufudumeza umbane okanye ukuhambisa umbane ngokuthe ngqo ngabatshisi. Xa kusetyenziswa iitanki ezininzi ngexesha elinye, imibhobho ephambi kwetanki ingayilwa kwaye ifakelwe ukwenza itanki lilonke lilungeleke xa kusasazwa kwindawo.
Isithambisi sebhitimen eveliswe yinkampani yethu kulula ukuyisebenzisa nokuyifaka. Itanki yahlulwe yaba ngamagumbi amabini, eli cala liphezulu lixhotyiswe ngezinto zokufudumeza, inkqubo ye-hydraulic ityhiliza i-bitumen bank nganye nganye, kwaye ibhitumene iyanyibilika ngokufudumeza. Ioyile eshushu esemgangathweni ifudunyezwa ukuze iqhubeke inyibilikise ibhitumene, emva koko iyakhutshelwa ukuba isetyenziswe. Isithambisi sebhitumene sinokufakwa kwisitya sokuhamba. Inkampani yethu nayo ivelisa ibhloko (ibhegi) yokunyibilikisa isixhobo, ukunyusa i-cantilever crane, ukusebenza okulula, ukusebenza ngokuphezulu.
Isilo sokugcina eshushu esiveliswe yinkampani yethu sahlulwe saba luhlobo lokukhusela indalo kunye nohlobo oluqhelekileyo. Inokumataniswa ngokuxutywa kwezityalo nge-80t / h-480t / h, kwaye ivolumu nayo inokulungiswa ngokweemfuno zomthengi. Umthamo weetoni ezili-160 kwaye ngezantsi unokungena kwisithuthi sesitya. Inkampani yethu iqhubekeke ukuphucula inkqubo yemveliso yesilondolozi eshushu kangangeminyaka emininzi, kunye nokusebenza okuqinisekileyo. Indawo yokugcina amanzi eshushu eshushu inobushushu ifezekisa iimfuno zokhuseleko lokusingqongileyo.
Isityalo seBumen Emulsion
Umzimveliso we-emulsion we-bitumen oveliswe yinkampani yethu unesakhelo esikhulu seoyile, itanki enye yamanzi ashushu, iitanki ezimbini zokuxutywa zokuxutywa kwamanzi, itanki enye yebhitumene, itanki enye emulsified isantya (umpu wokusetyenziswa), umpompo wesantya esinye sokuguqula isantya, umpompo wesantya esinye esimiselweyo , imitha enye, impompo yokuhambisa enye encinciweyo encinci kunye negumbi elinye lokulawula umbane. Kunye nokuhambelana nombhobho wokufudumeza kweoli yokufudumeza, ipayipen yokuhambisa ngombhobho, imibhobho yothumelo kumbhobho. Isityalo se-emulsion se-Bitumen sahlulwe saba zimbini: ngokupheleleyo-ngokuzenzekelayo kunye ne-semi-automatic. Ezizenzekelayo ngokupheleleyo zangaphambi kokucoca i-emulsifier, kwaye ngokusebenzisa indlela ye-mettractive yokulinganisa, ilungelelanisa ngokuzenzekelayo i-emulsion kunye ne-bitumen kwindawo yokugaya. Inkqubo ilula, kulula ukuyisebenzisa, kulula ukuyifunda nokuyiqonda.
I-SBS Polymer eguquliweyo ye-bitumen pant eveliswe yinkampani yethu yamkela uyilo lwe-skid olubekwe phezulu, olulungele ukufakelwa kunye nokudalwa. Itanki yokuxuba ixhotywe ngesantya esiphezulu sokusasaza i-agitator ukunqanda ukungalingani okwaneleyo kweebhs kunye nebitum. Ngaphandle kokudumba kwangaphambili, inokuveliswa ngokugaya ngelixa usondla. I-SBS Polymer eguquliweyo ye-bitumen pant yahlulwe yangumacandelo amabini: i-automatic automatic and semi-automatic. Isityalo se-PMB esizenzekelayo sithwele ubunzima beemodyuli ezinokulinganiswa kwaye zihambelane ngokuchanekileyo kunye neesobho kunye nebhitumene. Inkqubo yokulawula ikhompyuter inokujonga imeko yemveliso ngexesha langempela.
Isithambiso sokufudumeza i-oveni eshushu esinezinto eziphilayo esenziwe yinkampani yethu sahlulwe saba luhlobo oluqhelekileyo kunye nohlobo lomoya oshushu. Isitshisi sinokuba yioyile elula, igesi yendalo okanye igesi yeoyile. I-boiler yohlobo lomoya oshushu isebenzisa ubushushu obushiyekileyo begesi yeflue ukutshisa umoya ngokudibanisa, olunokunciphisa ubushushu begesi, ngenxa yoko ilahleko yobushushu yegesi yokuphelisa ingasetyenziselwa malunga neepesenti ezisi-7, ngoko ke ukusebenza kakuhle kwe-boiler malunga ne-90. %
I-Wuxi Jianeng yasekwa ngonyaka ka-1999. Inezikwere ezingama-24,000 zeemitha zezityalo, i-38.28 yezigidi zeYuan zekomkhulu elibhalisiweyo, ngaphezu kweengcali ezingama-20 kunye nabasebenzi abayi-100.
I-Wuxi Jianeng ikhethekileyo kwimveliso yezixhobo ezixhasayo zesityalo sokuxuba i-asphalt. Umthengi wexesha elide wokubambisana ubandakanya i-LINTEC, AMMANN, NFLG, XCMG, MARINI, D&G, NIKKO kunye noTanaka.
UWuxi Jianeng ubandakanyeke kuyilo lobunjineli boomatshini kunye nemveliso iminyaka engaphezu kwamashumi amabini. Ngokulandela ukusebenza kwemveliso, ifumene inani lobuninzi bokuqamba kunye nemveliso yoqobo yokusetyenziswa, efumene indumiso ngokuvumayo kushishino.
Itanki ebanzi ethe tyaba ye-XCMG
Itanki ebanzi ethe tyaba ye-NFLG
Indawo yokugcina eshushu ye-AMMANN
Itanki yethayile ethe nkqo ye-AMMANN
Indawo yokugcina eshushu yeLintec
Itanki ebanzi ethe tyaba ye-AMMANN
Itanki ebanzi yeTyumen ye-D&G
Itanki yokuluma ebanzi ye-D&G 2
leTela onyibilikayo Isixhobo , Drumn Melting Unit", Iibhinile zoGcino, Small Gold onyibilikayo Aasa , Mobile leTela kugecwa Station Lby1000 (80t / H) , ibhitumene onyibilikayo Isixhobo , i- Zonke Products